September 2012 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ့် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ Facebook အသုံးပြုခြင်း စာအုပ်ကလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးမှာ အခန်း (၁၈) ခန်း ပါဝင်ပြီး ၁။ Facebook ဆိုတာ ၂။ Facebook အကောင့် အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း ၃။ Profile Timeline အတွက်ရုပ်ပုံထည့်သွင်းခြင်း ၄။ Facebook Profile အတွက် Info ဖြည့်သွင်းခြင်း ၅။ Friends များကို စီမံခြင်း ၆။ Shariong on Facebook ၇။ Massage နှင့် Facebook Mail အသုံးပြုခြင်း ၈။ Groups များကို စီမံခြင်း ၉။ Game နှင့် Apps များကို စီမံခြင်း ၁၀။ Account Setting အသုံးပြုပြီး Account လုံခြုံရေးကို စီမံခြင်း ၁၁။ Privacy Setting အသုံးပြုပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို ကာကွယ်ခြင်း ၁၂။ Block/ Unblock ပြုလုပ်ခြင်း ၁၃။ Catting ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Emotion များ ၁၄။ Facebook သုံးသူတွေ အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ ၁၅။ Facebook သုံးသူတိုင်းသိထားသင့်သည့် အချက်များ ၁၆။ Mobile Phone/ Smart Phone နှင့် Facebook သုံးခြင်း ၁၇။ Facebook Account လုံခြုံရေး ၁၈။ နိဂုံးချုပ်အမှာ ဆိုပြီး ပြည့်စုံစွာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ... ဆောင်ထား ဖတ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးကို Mediafire နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်.. ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
IDM မှာ APK ကဲ့သို့သော အခြား File Types တွေကို ဒေါင်းစေချင်ရင်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ခုလေးတင်မေးတာနဲ့ အခြားမသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ အဆင်ပြေအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... ဖုန်းအတွက် ဂိမ်းတို့ အခြား APP တွေကိုဒေါင်းတဲ့အခါ .APK ဖြစ်တဲ့အတွက် IDM ရဲ့ ဒေါင်းမယ့် File Types ထဲမှာ မပါပါဘူး... အဲ့ဒီ့အတွက် IDM နှင့်ဒေါင်းလော့ချမပေးပဲ အသုံးပြုနေတဲ့ Browser ကနေဒေါင်းပေးပါတယ်... IDM မှာမပါတဲ့ အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ပထမဆုံး IDM ကိုဖွင့်လိုက်ပါ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... PC အတွက်တင်ပေးလိုက်လို့ ကစားကောင်းပါတယ် Android အတွက်ရှိရင်တင်ပေးပါလို့ တောင်းထားတဲ့သူငယ်ချင်းအတွက် Angry Birds လိုမျိုး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရီရီမောမော ဆော့ရတဲ့ Bad Piggies ဂိမ်းလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တကယ်ကစားလို့ကောင်းလို့ အပျင်းပြေကစားကြည့်ကြပါဦး... ဒီဂိမ်းလေးလည်း Angry Birds လိုနာမည်ကြီးလာမယ့် ဂိမ်းကောင်းလေးပါ.... အသေးစိပ်သိရအောင် နမူနာ ပုံတွေနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင် ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် Google Play မှာလည်း ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
ငတက်ပြား ဆိုတဲ့ မြန်မာ Game ကို Android Google Play မှာ အခမဲ့ Download လုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... မြန်မာ Android Game လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငတက်ပြား၏ စွန့်စားခန်းများ ကို www.myanmarplay.com မှာတင်ထားတာလေးတွေ့လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ငတက်ပြား ဆိုတဲ့ မြန်မာ Game ကို Android Google Play မှာ အခမဲ့ Download လုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။ ငတက်ပြား Game ကို စင်ကာပူ အခြေစိုက် မြန်မာ လူငယ်များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ Rival Edge Studio ကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Game ထုတ်လုပ်မှုမှာ ပါဝင်သူများကတော့...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အထွက်ကြမ်းနေတဲ့ IDM ကို တားကြပါဦးးးးးး ဟူးးးးးးးးးးး အခုတင်ပေးတာ Patch က အရင်သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ First name နဲ့ Last name တင်ထည့်ပေးရတဲ့ Patch ပါ... IDM 6.12 Build 21 Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 21 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Kaspersky Keys for All Product Kaspersky (28.9.2012)
Kaspersky Keys for All Product Kaspersky (27.9.2012)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Kaspar key လေးတွေ အသစ်လေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကီးထည့်ပုံကိုလည်း အောက်မှာပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Kasparsky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire download Minus download အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူနိုင်ပါတယ် ... Kaspersky Internet Security 2013 v13.0.0.3370 + key + activation (142.6 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Anti-Virus 2013 + key + activation (134 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Key ထည့်နည်း ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ Update ဖိုင်များကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယခု Kaspersky Keys for All Product Kaspersky ကို Mediafire မှာ လင့်ခွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အထွက်ကြမ်းနေတဲ့ IDM ကို တားကြပါဦးးးးးး ဟူးးးးးးးးးးး IDM ကလည်း နာရီပိုင်းလေးတင် update ထွက်နေတယ် မျက်စိတောင်လည်သွားတယ်... အခုတင်ပေးတာ Patch က အရင်သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ First name နဲ့ Last name တင်ထည့်ပေးရတဲ့ Patch ပါ... IDM 6.12 Build 20 Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 20 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Kaspersky Keys for All Product Kaspersky (26.9.2012)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ဟူးးးးးးးးးးး IDM ကလည်း နာရီပိုင်းလေးတင် update ထွက်နေတယ် မျက်စိတောင်လည်သွားတယ်... အခုတင်ပေးတာ Patch (4) မျိုးထည့်ပေးထားပါတယ် အရင်သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ First name နဲ့ Last name တင်ထည့်ပေးရတဲ့ Patch လည်းပါပါတယ်... IDM 6.12 Build 19 Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 19 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... AVG သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် AVG AntiVirus Pro Security 2013 Serial & Keygen လေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... serial keys နှင့် keygen နှစ်မျိုးစလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သုံးတာတော့ ကီးနဲ့တင်အဆင်ပြေပြီး keygen တောင်သုံးစရာမလိုပါဘူး... အသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် Zippyshare, Box, Dropbox, Sharebeast, Freehostina မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... IDM 6.12 Build 18 Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 18 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
23/09/2012 ESET NOD32 Antivirus & ESET Smart Security Username And Password
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... 23/09/2012 ESET NOD32 Antivirus & ESET Smart Security Username And Password ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ESET Endpoint Security 5.0.2126.3 Final (x86/x64) -- 60.8 Mb / 66.8 Mb ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ESET Endpoint Antivirus 5.0.2126.3 Final (x86x64) -- 55.3 Mb / 60.8 Mb ကိုအသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... အခုအောက်မှာ 23/09/2012 ESET NOD32 Antivirus & ESET Smart Security Username And Password ကို အောက်မှာ ကူးသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Kaspersky Keys for All Product Kaspersky (18.9.2012)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Kaspar key လေးတွေ အသစ်ရလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Kasparsky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire download Minus download အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူနိုင်ပါတယ် ... Kaspersky Internet Security 2013 v13.0.0.3370 + key + activation (142.6 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Anti-Virus 2013 + key + activation (134 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Key ထည့်နည်း ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ Update ဖိုင်များကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယခု Kaspersky Keys for All Product Kaspersky နှင့် Internet Security အသုံးပြုသူများအတွက် (190) ရက်ရမယ့် ကီးတစ်ခုတည်း နှစ်မျိုးစလုံးစလုံးကို Mediafire မှာ လင့်ခွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ဒီနည်းလေးနဲ့ ဆော့ဝဲလေးကတော့ Facebook ကနေသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းထားလို့ သတိရတာနဲ့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမှာပါ။ root လုပ်ဖို့အတွက်ဖိုင်ကိုတော့ ဒေါင်းပြီး zip ဖြည်ထားပါ။ ပြီးရင်တော့ ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ထဲမှာ ပါတဲ့ U9200 root.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို run ထားပါ။ဖုန်းရဲ့ Unknown Sources နဲ့USB Debugging ကိုအမှန်ခြစ်ပေးထားပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို ကွန်ပြုတာဖြင့် ချိတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ huawei driver တင်ပြီးသားဖြစ်ရပါ့မယ်။
Download Titanium Backup Root Pro 5.5.1.1 (v5.5.1.1) Apk + Lucky Patcher 2.2.3 (v2.2.3) Apk Android
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... စက်ရုပ်များအတွက် backup and restore လုပ်ချင်သူများအတွက် titanium Backup ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက မိမိဖုန်းက အမြှစ်တူးပြီးသားဖြစ်ရပါ့မယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးပေါ်ကနေ မိမိမကြိုက်တဲ့ original application တွေကိုပါ remove လုပ်ပစ်လို့ရပါတယ်။ ဆော့ဝဲသွင်းပုံလေးကတော့ Titanium Backup Pro 5.5.1.1 apk ကို အရင် ဖုန်းထဲကိုသွင်းပါ ရောက်သွာားရင် ဆော့ဝဲလေးကိုမဖွင့်ပါနဲ့အုံး ပြီးလျှင် Lucky Patcher 2.2.3 ဖုန်းထဲကိုသွင်းပါအုံး ပြီးလျှင် Lucky Patcher 2.2.3 ဖွင့်ပြီး activate Titanium Backup Pro 5.5.1.1 ကိုလုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ titanium backup ကို အဆင်သင့်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Facebook account hack တဲ့ဆော့ဝဲလို့ပြောတာပဲဘယ်လို hack ရလဲလို့တော့ သိဘူးနော် မိမိကိုယ်တိုင်သာ စမ်းကြည့်ကြပါ.. သူများအကောင့်တွေကို လျှောက်လုပ်ဖို့တင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့တောင်းပန်ပါတယ် ကျွန်တော့အကောင့်တော့ မဟက်နဲ့နော် တကယ်ပါ။ ဒီအကောင့်လေးတစ်ခုတည်းရှိလို့ပါ ဟက်လို့ရမဲ့အကောင့် လုပ်ပြီးရင်ပြောပါ့မယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ INSTRUCTIONS ပါထည့်ပေးထားပါတယ် အောက်က လင့်လေးမှဒေါင်းယူသွားနိုင်တယ် antivirus တွေတော့ပိတ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်းP Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် စမ်းသပ်အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Unistall လုပ်ဖို့ unistaller တစ်မျိုးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် အခုတင်ပေးတဲ့ uninstall tool လေးကတော့ windows 64 bit အတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် windows ရဲ့ add/remove program နဲ့ဆင်တူပါတယ် အသုံးပြုရတာလဲ တော်တော် လေး အဆင်ပြေပါတယ် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် အသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Internet Download Manager 6.12 Build 17 Beta (crack, patch သုံးဖို့မလိုတဲ့ Just Double Click)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... IDM ကို crack, patch သုံးဖို့မလိုတဲ့ Just Double Click ကို (နည်းနည်းလေကြီးပါရစေ) ကျွန်တော် Blog မှာ ဘယ်မြန်မာဆိုက်မှာမှ မတင်ပေးခင် တင်ပေးခဲ့တာကို သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း သိကြမှာပါ... ခုလည်း ဘယ်မြန်မာဆိုက်မှာမှ မတင်ရသေးခင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... (ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နိုင်ငံခြားဆိုက်တွေကပဲ ဒေါင်းပြီး စမ်းပြီး ပြန်တင်ပေးရတာကို) အချိန်ကွာလှ တရက်ပေါ့ဗျာ... နောက်ပိုင်းတော့ မတင်ပေးဖြစ်တော့ပါဘူး အခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဘာလို့မတင်ဖြစ်လည်းဆိုတော့ အခုတင်ပေးနေတဲ့ Patch တွေက သုံးရတာအရမ်းလွယ်တဲ့အပြင် Patch အသုံးပြုပုံ မရင်းနှီးသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိရင်လည်း ရင်းနှီးသွားအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်... Software တော်တော်များများက Patch ဖိုင်အသုံးပြုပြီး လိုင်စင်ယူရတာဆိုတော့ သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်... IDM အသစ်ထွက်တိုင်းကိုလည်း ထွက်ထွက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် ဦးဦးဖျားဖျားတင်ပေးခဲ့ပါတယ်... အခု IDM လေးကို Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... BlueStacks ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ android apk တွေ ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ သုံးလို့ရအောင် ဂိမ်းတွေဆိုရင်လည်း ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဆော့လို့ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးမှာပါ။ ဖုန်းထဲ ကိုမထည့်မှီ ကွန်ပျူတာ ပေါ်မှာစမ်းသပ်ပြီးမှ ဖုန်းထဲကို install လုပ်ချင်သူတွေအတွက်လဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဆော့ဝဲလေးကို install လုပ်တဲ့နေရာမှာ internet connection ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် လိုအပ် apps တွေ ကို download ဆွဲပြီး auto install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အားလုံးပြီးလို့ အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင် တော့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဒေါင်းထားပြီးသားဖြင့်တဲ့ apk တွေကို double click နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ bluestacks ပေါ်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလေးကိုတော့ အောက်က ဒေါင်းလုပ်လင့်လေးမှ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ crack ဖိုင်လေးက တော့ တောင်းထားတဲ့သူတွေတော်တော်များဒါနဲ့ ကွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာပါ ဘာတွေ သုံးလို့ ရတယ် ဆိုတာတော့သိဘူးနော် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာစမ်းကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ ။သူများစက်ထဲ လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်
နာမည်နဲ့လိုက်အောင် မြန်ဆန်ပါတယ် မြင့်ပေးနိုင်ပါတယ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက်ရှု့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Mediafire download link က တင်ပေးထားတာပါ အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...
Computer PC (Laptop) နှင့် TV ချိတ်ဆက် အသုံးပြုပုံ